Ukukhiqizwa yi-cuttings | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukukhiqizwa yi-cuttings
Izimiso zokunakekela i-chlorophytum
I-chlorophytum iyisibhakabhaka esingapheli esinamagatsha amhlophe-aluhlaza okwesibhakabhaka ekhona cishe kuwo wonke amakhaya. Lesi sitshalo asifuni ukukhathalela. Futhi kulesi sihloko sizoxoxa ngendlela yokutshala i-chlorophytum nokunakekela isitshalo. Ake sihlole ukuthi ungayandisa kanjani i-chlorophytum, tshela mayelana nezinambuzane nezifo zalesi sitshalo Uyazi?
Ukutshala nokunakekelwa kwe-turquoise kufasiteleni lakho
I-Privet isitshalo esesihlotsheni sezinhlobo ezincane ezivuthiwe, izihlahla ezincane nezitshalo ezivuthiwe kanye nezihlahla ezivela emndenini ka-Olive. Okuvamile kakhulu eYurophu, e-Australia, eNyakatho Afrika nase-Asia. Izinhlobo eziningi ze-privet ziseJapane, eChina, eTaiwan nase-Himalaya. Uyazi? I-Privet ihlanganisa izinhlobo ezingaba ngu-50.
Ukukhula kwe-Japanese Quince kusayithi lakho
I-Chaenomeles, noma i-quince yaseJapane, ikhulile njengesiko elihlobisa izithelo eziwusizo. Ngesikhathi sokuqhakaza, lesi sitshalo esimnandi kakhulu siwumhlobiso kunoma iyiphi ingadi, futhi izithelo zawo zenza ama-dessert enhle kakhulu: ama-jams futhi agcina. I-Chaenomeles iyadingeka njengegceke elizungeza isakhiwo, uhlelo lwayo olunzulu lwezimpande zithwala inhlabathi evulekile.
Indlela yokukhulisa ama-balsamines ensimini
Ibhalsamu - imbali ehlala njalo engadini, okuyinto isitshalo sezimbali, umthunzi obekezeleleke kahle. Ibhalsamu ine-stem eqondile, ekhula kuze kube ngu-50 cm, amaqabunga ama-oval kuze kube ngu-12 cm ubude. Ibhalsamu inkulu ngokudala ubuhle emthunzini wensimu. Ungakhula imbali ensimini yembali esakhiweni, nasekhaya efasiteleni.
Kungani ihisopi iwusizo?
I-Majestic Hyssop - isitshalo esihlala siwusizo emnothweni. I-hyssop, noma i-wort blue John's, esivela emndenini wase yasnotkovyh, ikhula e-Asia, iMedithera, eCaucasus, eCrimea. Uyakuthanda ama-steppes nama-stony slopes. Ukuhlalwa kwehisopi kusukela ezikhathini zasendulo kwakubhekwa njengento ebalulekile futhi engcwele. Wonke umpristi no-shaman baphatha lesi sitshalo ngothando futhi banakekelwa.
Indlela yokukhulisa umjunipha
I-Juniper isitshalo esivela emndenini we-cypress. Kwabonakala eminyakeni eyizigidi ezingu-50 edlule, futhi emhlabeni jikelele kunezinhlobo ezingaba ngu-70 zalesi sitshalo. Ezinye izinhlobo zemjunipha zifinyelela ku-15 m ukuphakama. Izinhlobo nezinhlobonhlobo zamjunipha ezisetshenziselwa ukuklama umhlaba. Hamba ngqo ezinhlotsheni nezinhlobonhlobo zemjunipha.
Indlela yokukhulisa i-gerbera ekamelweni efasiteleni lakho
I-Gerbera ingenye yalezo zitshalo ezifanelwe ukuthanda abalimi nabacimi. Izimbali ezinkulu, ezinjenge-daisy ezisezintabeni ezindala, ezingenamagatsha zingaba umhlobiso wangempela wendlu yakho. Yiqiniso, lokhu kungatholakala kuphela uma kwenzeka ukunakekelwa kahle kwe-gerbera, ikakhulukazi ebusika.
Indlela yokukhulisa i-oleander ekhaya lakho
U-Oleander uyisitshalo esivame ukuluhlaza somndeni we-kutrov. It has izimbali ezinhle elikhanyayo imibala ehlukahlukene kanye namaqabunga amnyama aluhlaza amancane. Kunezinkondlo eziningi ezihlobene nalommeleli wezitshalo, izibonakaliso zomuntu nezinkolelo-ze. Naphezu kobuhlungu be-shrub, ema-subtropics kusetshenziselwa kabanzi ekudalweni kwezwe.
I-spirea yaseJapan - izinhlobo ezinhle kakhulu, ukutshala nokunakekelwa
Ngokuvamile ukunakwa kwakho emibhedeni yedolobha kudonsela i-shrub encane yokuhlobisa ngezimbali ezibomvu namahlamvu aphuzi. Lona yisiJapane se-spirea. Wathatha indawo efanelekayo emhlobheni wemibhede yasemadolobheni nasezindaweni zasemadolobheni ngenxa yezindleko zayo eziphansi, ukungathobeki nokugcina izimfanelo zokuhlobisa kusukela entwasahlobo kuya ekwindla sekwephuzile.
Lilac: amathiphu okutshala nokunakekelwa
I-Lilac iyi-shrub yezimbali ezinamahlumela aluhlaza ezimbali ezibucayi, azijabulisi nezephunga elimnandi nelincane. Lesi sitshalo sijwayele ukusika izihlahla, okukuvumela ukuhlobisa isayithi kanye namafomu okuhlobisa okunye, namaqembu, ngisho nokuhlala ezicingo. Lapho ukutshala i-lilac Izimo ezinhle ze-lilac zilandelayo: indawo ephansi; inhlabathi iyaswakanyiswa, ne-drainage enhle kanye nezinkomba ze-acidity, eduze nokungathathi hlangothi; ukuhamba kwamanzi angaphansi komhlaba okungenani amamitha ayisithupha nengxenye ukusuka phezulu; ilanga ilanga kakhulu usuku; indawo yokuhlala yokushicilela.
Indlela yokukhulisa i-zamiokulkas, ukutshala nokunakekela "umuthi wemali"
I-Zamioculkas iyi-flower exotic eye yathandwa kakhulu esikhathini esifushane. Ngokufanayo, owesifazane onamafutha, ubizwa ngokuthi umuthi wemali, kodwa ukuze ungadideki nalezi zinsuku zokugcina, i-zamiokulkas ngokuvamile ibizwa ngokuthi i-dollar tree. Ngakho-ke, kusobala ukuthi uvame ukuhlobisa isikhala sehhovisi kanye namabhange. Izimo ezifanele zokukhula kwezitshalo Endle, lesi sitshalo siqala kahle emhlabathini owomile nangaphansi kwelanga elishisayo.
Ukunakekelwa nezimo ezikhulayo zasekhaya begonia
I-Begonia yisitshalo esivela emndenini waseBegoniyev futhi sihlobisa izikwele, amapaki namafulethi. Emhlabeni kunezinhlobo ezingaba ngu-900 eziphilayo zalesi sitshalo. Homeland Begonias - Southeast Asia. Usayizi wezitshalo ungaba kusuka ku-5 cm kuya ku-3 m ubude. Kulesi sihloko, uzofunda ezinye zezimfihlo zokunakekela izimbali ezinhle zaseBenesonia ekhaya.
Zonke izimfihlo zokulima ama-achimanes ekhaya
U-Ahimenez uyilungu lomndeni wakwaGesneriev. Kunezinhlobo ezingaba ngu-50 zalezi zikhula emhlabeni wonke. Indawo yase-Ahmenes - eNingizimu neMelika Ephakathi, yaziwa kusukela ngekhulu le-XVIII. Lesi sihloko sizokwazisa ngazo zonke izimfihlo zokutshala imbali ekhaya. Uyazi? Ahimenez - isihlobo sama violets.
Izici zokutshala nokunakekela i-rosemary, amathiphu abathandi bezitshalo zabadoli
I-Rosemary iyisihlahla esivamile, esaziwa kangcono njenge-spice. Noma kunjalo, i-rosemary isetshenziselwa ukupheka kuphela, inezinto ezithile zokuphulukisa namafutha abalulekile ama-perfume nama-cosmetologists asebenzisa. I-Rosemary: Incazelo Yezitshalo Ngakho, yini i-rosemary? Le shrub engapheli ngamaqabunga, izinaliti, ezifana nezinaliti zephayini.
Ukunakekela kahle indlu yomgwaqo
I-Thunbergia ibaluleka ngezimbali ezinhle, ezingaba nge-shades ehlukahlukene, kanye nendawo yayo yokuphoqa. Kungasala ukukhahla emhlabathini, kufakwe emabhodini ukuze ibeke phansi amahlumela amnandi, noma vumela i-curl kusekelwa. Noma kunjalo, ukuvuleka komhlaba, kudinga ukufakelwa kwonyaka. Izimo ezifanele ze-tunbergia ekhulayo ekhaya Ukutshala okulimazayo okunamandla kwe-tunbergia ekhaya.
Ukuphindaphinda kwemifino nokuhlwanyela kwembewu ye-magnolia
I-Magnolia ingenye yezimbali ezinhle kakhulu, njalo iyamangalisa wonke umuntu ohambisana nobuhle bayo, i-variegation nephunga eliyingqayizivele. Abathandi bomklamo wokuhlobisa abangahlosiwe bazama njalo ukuhlobisa izindawo zabo siqu ngezihlahla ezinjengokuhlobisa, ngenkathi bezama izindlela ezahlukene.
Imfihlo ye-Iberis ekhula njalo engadini yakho
U-Iberis ovuthiwe uyisithombo esihlala isikhathi eside somndeni we-cruciferous (iklabishi), obala izinhlobo ezingu-40. Igama lesibili - i-Iberia, i-pepper, i-stennik, i-razlelepestnik. Endalweni yemvelo ikhula ezindaweni ezizintaba zase-Asia, amazwe aseMedithera, eCaucasus, eCrimea kanye nasezindaweni eziphansi zeDon. Uyazi? Iberis ibizwa igama layo kusukela ngegama elithi Iberia - igama lesiGreki lasendulo laseSpain lanamuhla, lapho izintaba zezintaba zase-Iberia zigcwele khona.
Clematis cuttings entwasahlobo nasekwindla
I-Clematis iyi-shrub enezimbali ezinhle kakhulu ezinemibala ehlukahlukene. Izimbali ziqhubeka kusukela entwasahlobo kuya ekwindla sekwephuzile. Lesi sitshalo siyabiza, ngakho-ke ulwazi lendlela yokwandisa i-clematis kuyoba usizo kubalimi abaningi. Uyazi? I-Clematis iyisitshalo esingapheli esivela emndenini we-Buttercup futhi isitshalo esinezinyosi.
Ukutshala nokunakekela i-chrysanthemum multiflora, izici zezitshalo ezikhulayo ezitshaliwe
Imfashini yeflorishi neyensimu iyathuthuka namhlanje njengoba nje kunomunye umkhakha. Iqembu elisha lezitshalo, elinqobile imakethe yembali futhi manje seliphakeme kakhulu phakathi kwabalimi, i-chrysanthemum multiflora. Ngenxa yezici zayo ezinhle zokuhlobisa, le mpahla inqobe izinhliziyo zabanye abacwaningi bezobuchwepheshe kuphela, kodwa futhi nabalingisi abafuna ukuhlobisa iziqephu zabo.
Imithetho yokukhiqiza i-kampsis: amathiphu avela kubalimi bezimvini abanolwazi
Abaflorisi abaningi banesithakazelo kumbuzo, yiziphi izindlela zokukhiqiza kampsis. Omunye kuphela owazi ukukhiqiza okukhiqizayo, abanye bazi izindlela eziningana zokutshala izitshalo ezincane kusuka emahlumela noma izingxenye zesimiso sezimpande. Ukuze ukwazi futhi ukwazi ukusebenzisa zonke izindlela ezitholakalayo zokukhiqiza imbali, siye sahlanganisa lesi sihloko
Indlela yokukhulisa i-Venus flytrap ekhaya
Emvelweni, kunezitshalo zokudla. I-Venus flytrap noma i-dionea (i-Dionaea muscipula) - enye yazo. Le nhlobo yokuphela kwe-herbaceous yomndeni we-dewed ine-rosette yamaqabunga angu-4-7 akhanyayo nama-prongs eceleni kwemiphetho kanye nezinhlayiya zokugaya. Uma uthintwa, iqabunga ngalinye lingavimba njengezikhumba ze-oyster.
Ukuhlukahluka okuvamile kanye nokunambitheka okukhulu - amagilebhisi amaKishmish Jupiter
Amathiphu kusuka kubalimi: kungani ama-marigold asomile nokuthi benzeni ngakho?
Isivakashi esihle esivela e-Afrika Adenium Obese (i-Obesum): incazelo ngezithombe nezincomo zokunakekelwa
Isimbali se-Spathiphyllum domino - ukunakekelwa kwasekhaya
Amabhilidi emabhandlela. Ungasusa kanjani i-sorrel yamahhashi endaweni nhlobo?